Apple inosimudzira pachayo mu Super Bowl mune yechitatu-bato kushambadzira | Ndinobva mac
Apple inosimudzira pachayo mu Super Bowl mune yechitatu-bato ads
Usiku hwapfuura hwaipisa chaizvo uye sezvamunoziva mese kuti yaive Super Bowl muUnited States. Muna 1984 kushambadzira kweMacintosh yekutanga kwakaratidzwa mumashambadziro Iwo makambani anowanzo kuita raffle panguva yekuzorora kwemusangano uye imhaka yekuti aya ma ads anoonekwa nemamiriyoni evanhu husiku ihwohwo.
Nekudaro, kwegore rimwezve iro chinhu cheCupertino hachina kuda kuvepo sechiratidzo chekutengeserana mune izvo kushambadzira, kunyangwe zvigadzirwa zvaro zvakaonekwa mune akati wandei e kushambadza kwakaratidzwa mumaminetsi ekushambadza echiitiko chikuru ichi.
Zvakare iyo Super Bowl, American nhabvu yekupedzisira par kugona. Chiitiko umo kunyangwe maartist eiyo chimiro Coldplay, Bruno Mars kana Beyonce vakaungana. Mune ino kesi, iyo yekupedzisira yakaitirwa pamberi pevanhu vanopfuura makumi manomwe ezviuru vaivepo paRevi's Stadium muSanta Clara, California.
Avo vaisagona kuve panyama pamusangano, iyo inogona kuverengerwa mumamirioni, vakaita saizvozvo kubva kudzimba dzavo uye ndosaka kushambadza uko kwakaburitswa mumaminetsi iwayo ekuzorora kunokosha zvirimo mugoridhe.
Sezvatakakuudza, Apple raisave iro hombe zita asi zvigadzirwa zvaro zvaive mumatanho anopfuura matatu echitatu-bato reshambadziro, saka zviri pachena kuti iwo eapuro akarumwa akavhara zvibvumirano nemaoko iwayo saka kuti zvigadzirwa zveApple zvaive mavari.
Isu tinotanga nekuzivisa kweT-Mobile uko inokumbira muoni kuti ashandise Apple Music muhupenyu hwavo hwezuva nezuva.
Imwe shambadziro iyo iyo iPhone 6s uye iPad Mhepo isina kumira kuoneka ndiyo iyo yaibata neyakakurumbira Mobile Strike mutambo. At Arnold Schwarzenegger nyeredzi mune inosetsa nyaya neApple zvishandiso senge mutambo wepakati.
Apple Watch, zvakadaro, yakaonekwa mumhanyisa mhanya yevaviri vanofamba vachitiza mabheya maviri musango. Pavanosvika pamotokari yavo yeHyundai ivo Ivo vanovhura neApple Watch kuburikidza neBlue Link Bluetooth system.
Chekupedzisira, Beats brand haisi kumashure kumashure uye inoonekwa mune imwe shambadziro inotarisa mutambi weCarolina Panthers, Cam Newton, mairi tinogona kuona zviitiko zvekudzidziswa kwake kwemazuva ese neiyo nyowani Powerbeats Wireless 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple inosimudzira pachayo mu Super Bowl mune yechitatu-bato kushambadzira
Apple Music inouya kuTaiwan uye inowanikwa munyika zana negumi nematatu
Chengetedza mapurojekiti ako zvinobudirira neRedbooth